ဘုန်းကျော်: လူ့ ဘောင်သစ် (ပြည်တွင်း) နဲ့လူ့ ဘောင်သစ် (ပြည်ပ)
စိတ်ထဲရှိတာကို ရေးချနေတဲ့ ဘလော့ဂ်ဒိုင်ယာယီလို့ သတ်မှတ်ပေးပါ
ဘုန်းကျော် Group ဖွင့်ပြီ...
Subscribe to phone_kyaw
လူ့ ဘောင်သစ် (ပြည်တွင်း) နဲ့လူ့ ဘောင်သစ် (ပြည်ပ)
ပြသနာတော့ ရှိနေပြီ။ ဒါကတော့ ပြည်ပမှာ လူ့ ဘောင်သစ်တစ်ခု။ ပြည်တွင်းမှာတစ်ခု။ ပြည်တွင်းက လူ့ ဘောင်သစ်ကို ပြည်ပလူ့ ဘောင်သစ်ရဲ့ လက်ရှိဥက္ကဌကိုအောင်မိုးဇော်က အသိအမှတ်မပြုပါဘူး။ တလောက သူ့ အင်တာဗျူးမှာ သူတို့ ဟာ တချိန်လုံးရန်သူ့ အကြိုက်လိုက်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေလို့ ဆိုပြီး သူ့ ခံစားချက်ကိုပြောရှာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူက မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောချင်ပါဘူး။ အထဲက လက်ရှိတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဇင်အောင်ပြောတာကတော့ ပြည်ပက လူ့ ဘောင်သစ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသလို၊ ကိုမိုးသီးဇွန်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဓိကပြသနာက အပြင်က လူ့ ဘောင်သစ်ဥက္ကဌက လုံးဝကို သဘောမတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ အတော်ထူးခြားပါတယ်။
တကယ်တမ်းပြောရရင် လက်ရှိတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာက ပြည်တွင်းကလူတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်ပကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အကယ်၍ ပြည်ပလူ့ ဘောင်သစ်တွေ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်ပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင်ရင်တောင် လူ့ ဘောင်သစ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အခြားနာမည်ပြောင်းရပါတော့မယ်။
ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတော့ တစ်ခုပဲလုပ်စရာရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းက လူ့ ဘောင်သစ်က အသိအမှတ်ပြုတာကို လက်ခံပါ။ သူတို့ ကိုလည်း ပြန်လည်ပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီး လုပ်ကြပါ။ ဒါမှ လူ့ ဘောင်သစ်ကို တကယ်တန်ဖိုးထားကြောင်း ပြရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တော့ ပြည်တွင်းက လူ့ ဘောင်သစ်ရဲဘော်ဘ၀နဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်နေပါပြီ။
ရေးသားသူ - ---- at Thursday, March 15, 2012
ဥက္ကဌကြီး စောက်စားကြီးစောက်အီး တဘူဘူ
အဖေက တပ်ကြပ်ကြီး။ သာယာဝတီ သုံးဆယ်သား။ အမေက သထုံပအိုဝ့်။ မွေးတော့ အင်းစိန်ဖော့ကန်။ အောင်ဆန်းသူရိလှသောင်းကျောင်းမှာ ၁၀-တန်း နှစ်ခါကျတဲ့အထိ ၇-နှစ် နေဘူးတယ်။ မင်္ဂလာဒုံက တပ် တစ်ခုမှာ ၁၉-နှစ်အထိ ကုလားပဲနဲ့ ညားဘူးတယ်။ မိန်းမက မွန်။ ခလေးတွေက အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောတော့တယ်။ အခု သြစတျေးလျနိုင်ငံPerth မှာ နေတယ်။ မိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပါ။ ကျနော့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေပါ။ ဘုန်းကျော်ဆိုတာ တော်လှန်ရေးက ပေးတဲ့နာမည်တစ်ခုပါ။ ဆက်သွယ်ရန်- wgdperth@gmail.com
ABSDF မြောက်ပိုင်း\_ လူသတ်ပွဲမှတ်တမ်း
စစ်ကြောရေးမှာ ပါဝင်သူ တပ်ရင်းမှုး ကိုသိုက်ထွန်းဦးဘာတွေပြောလဲ (မြောက်ပိုင်းကိစ္စ) အသံဖိုင်
မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၂-၃) အောင်မိုးဝင်း
မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ( အပိုင်း-၁) (အောင်မိုးဝင်း)
ကျွန်တော် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ခဲ့စဉ်က..
ကျွန်တော် လူကက်ဆက် (ဇာတ်သိမ်း) ထိန်လင်း
ပန်းနဲ့ပေါက်တာလောက်ပဲ ထင်တယ်သူငယ်ချင်းတို့ရေ (ဆလိုင်းကိုကိုဦး)
သူများတွေ ဘယ်နေရာကိုလှူကြသလဲ (ဆောင်းပါ)
ဘာ့ကြောင့် ကိုအောင်မိုးဇော် အမေရိကန်မှာရောက်နေလဲ
လူ့ ဘောင်သစ် (ပြည်တွင်း) နဲ့လူ့ ဘောင်သစ် (ပြည်ပ)...
လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ မတရားမှုမှန်သမျှ ဖော်ထုတ်ရန်
ကျနော့်ရေးသောစာများအား ကူးယူဖော်ပြသူများအားလုံး ကျနော့်ထံသို့ အကြောင်းကြားစေချင်ပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားချင်လို့ပါ။ ကျနော့်စာများအား ကြိုက်သလိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပါသည်။
အတိုက်အခံတွေ မဟာဗျူဟာမြောက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါ (ဟစ်တိုင်)
အမှိုက်တွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (JACBA ဘလော့ဂ်)
ဒုက္ခသည်အတုတွေကို သတိထား (Karen National League-Japan)
ဒုက္ခသည်အတုတွေကို သတိထား (ဘုန်းကြီးများဆိုက်)
ဒုက္ခသည်အတုတွေကို သတိထား (မောင်ချစ်ဘလော့ဂ်)
န၀တ-နအဖ မှ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရဆီသို့ (ဟစ်တိုင်)
ဒုက္ခသည်အတုတွေကို သတိထား (Sky ကရင်)
ရာဇ၀တ်သားတွေကို အရေးကိုယူရမယ် (သိရိလင်္ကာဆရာတော်များဆိုက်)
ဒုက္ခသည်အတုတွေကို သတိထား (ဟစ်တိုင်)
၀ိုင်းစုလေးကိုချစ်ချင်ပါတယ်...သို့သော်.. အနုပညာရှင်များကို ဆန္ဒတော့ မပြချင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် တ၀ကြီးနမ်းပြစ်ချင်ပါတယ်။ ချောလည်းချော..လန်တ...
မှတ်ပလား ဇာဂနာ ဂတုံးကြီးရဲ့ 
ဆယ်မွန်ငါး ခင်ဝမ်းရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းဖြစ်တဲ့ "ဆယ်မွန်ငါးတို့ အပြန်"ဆိုတာကို ကြားဘူးလိမ့်မယ်။ ဆယ်မွန်လား၊ ဆိုင်မွန်လားတော့...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ပထမဆုံး အောင်မြင်သော မိုးကျရွှေကိုယ်(မြန်မာ အပြာဆိုက် )
မြန်မာ အပြာဆိုက်။ http://moekyashweko.ning.com/ ကြော်ငြာတာမဟုတ်။ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘောင်းဘီတို နဲ့ စကတ်ဝတ်ရင်တောင် ကဲ့ရဲ့ ချင်တဲ့သူ...
ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့7Days News သတင်းထောက်သို့.......
အာ, ပါရစေ... မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြီး အာ,ပါရစေ။ နိုင်ငံရေး ကိစ္စလောက်ပဲ အာ, ဖို့ အထူးစိတ်ဝင်စားပေမဲ့၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကိစ္စ၊ ဂျာနယ်သတင်းေ...
*ချစ်ယောင်္ကျားပို့တဲ့ အသုံးစရိတ် အနမ်း(၁၀၀)*
တနေ့မှာ ယောင်္ကျားဖြစ်သူမှ ချစ်ဇနီးထံ စာတစ်စောင်ခုလိုရေးသတဲ့.. သို့ အချစ်လေးရေ! ကိုယ်ဒီလ အသုံးများသွားလို့ ပိုက်ဆံမပို့နိူင်တော့ဘူးကွာ။ ဒ...
စစ်ကြောရေးမှာ ပါဝင်သူ တပ်ရင်းမှုး ကိုသိုက်ထွန်းဦးဘာတွေပြောလဲ (မြောက်ပိုင်းကိစ္စ)
ကိုသိုက်ထွန်းဦး (ဆစ်ဒနီ-သြစတျေးလျရှိ သူ့ နေအိမ်တွင်) ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းသားအချင်းချင်း သတ်ခဲ့ကြတယ်။ စစ်ကြောရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်...
တစ်ကပြန်စမယ် တခါတုန်းက မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ပြင်သစ်သမ္မတတို့ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ကြပါသတဲ့။ ပြင်သစ်သမ္မတကလဲ မြန်မာပြည်ကို ကြည့်ပြီး အထင်သေးစွာနဲ့ သူတ...
သူ့ ကို ဖမ်းမိပြီ...မကြာခင်ဖော်ပြပါတော့မယ်။
သူက ထိုင်းနယ်စပ် Refugee Camp တစ်ခုကနေလတယ်။ သူ့ ဆွေမျိူးတွေ ကန့် ထဲမှာ ကျန်နေတုန်း။ England ကနေ အတိုက်အခံတွေ သွေးကွဲအောင် ဘာသာခြားအချင်းချင်...
မကြိုက်ရင် မလာနဲ့။ မဖတ်နဲ့။ ရှင်းရှင်းပြောမယ်...ငါ့စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်းကို ငါပြောနေတာဖြစ်တယ်..။ ရိုင်းချင်လဲရိုင်းမယ်။ ယဉ်ကျေးချင်လည်းယဉ်ကျေးမယ်။ ငါ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ငါပဲဖြစ်တယ်..။